Faah faahin:- Madaafiic qasaare kala duwan geystay oo ku dhacay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Madaafiic qasaare kala duwan geystay oo ku dhacay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic noociisu hoobiyaal ahaa oo maanta ku dhacay guryo ku yaalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Illaa seddax madfac oo aan la garaneyn halka laga soo tuuray ayaa la sheegayaa in labo ka mid ah ay kusoo dhaceen guryo ku yaallo xaafadda Danwadaagaha ee degmada Wadajir, halka midka seddaxaadne uu ku dhacay meel banaan ah.
Labada guri ee madfaca ku dhacay ayaa la sheegayaa inay ku geeriyootay illaa 5 qof oo isugu jira dumar iyo caruur, iyadoona tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacantay.
Dadkii geeriyooday ayaa la sheegayaa in qaarkood la kala garan waayay maadaama hilbaha jirkooda uu aad u goo’goay, waxaana labadaasi qoys markii dambe usoo gurmaday dadka deriska ah.
Dadkii ku dhaawacmay madaafiicdaasi ayaa la sheegayaa in markii dambe loola cararay xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada Muqdisho, waxaana dadkaasi dhaawaca ah ku jiray islaan waayeel ah iyo caruur yar-yar oo dhaawacyo culus soo gaaray.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkaan ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmajo uu ku dhawaaqay in dalka uu ku jiro xaalad dagaal, islamarkaana ugu baaqay dhalinyaradda Al-shabaab in muddo labo bilood ay isku soo dhiibaan.